ဝတ်ရည် မီးဖိုချောင် | Wutyee Food House
Hmone Gyi says:
wow u have microwave, oven, grill, toaster..coffee maker…slow cooker…kettle…so much…envy u 😉
WOW is the right word. She’s got all the latest gadget. She must be one perfectionist. She’s very organized. Did she actually cook there?
full of cooking tools 😀 cool!
Trader Begger says:
and ur knives?
of coursre…there is set of knives as without knivef, can’t cook lol 😉
ko hla mg says:
without knife, u can chop up with your teeth. ahee 😀
Daw Ni says:
I’d like to cook with you in your kitchen.
haa.. Thanks 🙂
Hey add more fotos!
hey sis …
i love ur kitchen ,,,so nice …not like natural kitchen that i ve never seen in burma…and i also like ur design ,,,i will try when i have change to cook…so interesting blog…wish to upload more burmese cultural foods like :mont hin khar .coconut noodle .and any other desert that we can’t eat at outside of burma.
ွှ့ကျေးဇူးပဲ ပွင့်သစ်၊ မြန်မာ အစားအသောက်တွေလည်း နောက်ကျ တင်ဖို့ရှိပါတယ်..
Aye Swe says:
Thank you very much your contribution which is very useful for us.
great job, gal .. it’s my first time visiting to you blog and i love it .. keep it up and all the best 🙂
ps : you must cook sth nice for me when i come bak .. kekekek 😛
Thanks for visit my blog, friend.. I will surely treat you, when u came back on Yangon.. heee 😉
လှတယ်နော် မီးဖိုချောင်ရော … ပိုင်ရှင်ရေား-)
ခုလိုမြှောက်ပြောလို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် shee… နောက်မှမုန့်ဝယ်ကျွေးပါမယ်… 😉
မီးဖိုချောင်လေးကလဲ ခေတ်မှီပြီး သန့်ပြန့်နေတာပဲ။
ပြီးတော့ မိမိသုံးနေတဲ့ အမွှေးကြိုင် ပစ္စည်းတွေကလည်း သန့်ရှင်းနေတာပဲ။
Thanksalot Ko TharGyi 🙂
ကြိုက်လွန်းလို့ kitchen ဓါတ်ပုံ တွေ copy ကူးလိုက် တယ် မဝတ်ရည် ရေ…….
Many Thanks Ko Nay Min 😉
၀က်နံကင် လုပ်နည်း ။ ဘဲကင်လုပ်နည်း တို့ရေးပေးပါဦး ။ နံကင်ဆိုတာက နံရိုးကင်မဟုတ်ပါ ။ သုံးထပ်သားကို ရှမ်းတရုပ်များကင်ရောင်းနေသည့် အကင် ကိုဆိုလိုပါသည် ။ ( ကျေးဇူးတင်ပါသည် )
သုံးထပ်သားကင်တော့ လုပ်နည်းတင်ပေးပါ့မယ်.. ဘဲကင်ကလုပ်တတ်ပေမယ့် လူများမှ လုပ်ဖြစ်မှာမို့ နောက်မှ တင်ပေးပါမယ် ကိုအောင်ကြည်.. 🙂
really…good! Sis, ur kitchen is Neat & Tidy…..I envy…..
san tun oo says:
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲချက်နည်းရှာလို့ မတွေဘူးလို့ ပါ ရှိ၇င်တင်ပေးပါအုံးနော်
Nice Kitchen and Excellent Cooking Skill makes you perfect and top up with your willing to share your recipes. I am Lucky to read your recipes and thanks for sharing.
Wish to do more and more delicious cooking at home and can share to us forever.
Remember your good will worth than anything.
Best Wishes for your future and your Kitchen
ကိုကျော်အောင် ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ခုလို ၀တ်ရည် ဟင်းချက်နည်းတွေကို ဝေမျှခွင့်ရလို့တောင် ၀တ်ရည်က ၀မ်းသာနေတာပါ။ နောက်နောင်လည်း ကြိုးစားပြီး ဟင်းသစ်တွေ တင်သွားပါ့မယ်… 🙂
Hi Ma ChoWutYee
May I request you to upload more burmese cuisines??? I have tried nearly all of the present ones and am really happy with the result. Thanksalot for sharing. It isashame to tell you that I amachef (cooking only european cuisines) and never worked out before to properly cook our own traditional ones till I used your recipes. Cheers, HKA.
ကျေးဇူးပါနော် ကိုထက်ကျော်အောင်… မြန်မာ ရိုးရာ ချက်ပြုတ်နည်းတွေကိုလည်း နောက်ပိုင်း တင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်.. Thanks 🙂
>>> san tun ooရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲချက်နည်းရှာလို့ မတွေဘူးလို့ ပါ ရှိ၇င်တင်ပေးပါအုံးနော်
ရွှေတောင်ခေါက်ဆွဲ လုပ်နည်းတော့ မတင်ရသေးဘူး။ ၀တ်ရည် ဒီလထဲတော့ ကြိုးစား ပြီ တင်ပေးပါမယ်နော်.. 😉
Htoo ရေ ပြင်သစ် ချက်ပြုတ်နည်း စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ထားတာ တော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ အနောက်တိုင်း ချက်ပြုတ်နည်းကို အင်္ဂလိပ်ရေးထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေတော့ သိတယ်..
I would like to know Malay: fried noodle and fried flat rice noodle (san pyar) . thanks alot
မလေးရှား ခေါက်ဆွဲကြော် လုပ်နည်း တင်ပေးပါမယ် မမိုး… 🙂
ခိုင်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါနော်… အားရင် ချက်စားဖြစ်အောင် ချက်စားကြည့်ပါနော်… 😛
ခိုင်ရေ အီးမေးပြန်ပေးထားတယ်နော်.. 🙂
ဟင် မမ ကလဲ အကုန်သိအောင်တင်လိုက်ပေါ့…..
Hi Ma Wutyee!!!
Nice to meet you and ur blog!! Thanks u so much for sharing cooking knowledge. I think ur food will be so delicious and u r also so smart and beautiful…
Looking forward ur new cooking.
Really Thanks par Hnin yay!!! 😀
ုkyi mar says:
အစ်မက အစုံလုပ်တတ်တာပဲနော် အားကျလိုက်တာ အစ်မကို
ကျေးဇူးပါနော် ကြည်မာ.. 🙂
ကျေးဇူ့ ပြုပြီမမကို လိုင်းပေါ်မှာစကားပြောချင်လို့ ပါ
ကိုမမနာမည်နဲ့ မမမေလ်ပို့ ပေးပါနော်…
Seng Li Kham says:
Very cool n great cook,sis !
Thanks Ma Kham!
အစ်မရေ ကျေးဇူးပြုပီး မြေအိုးမြည်းရှည်ချက်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. 🙂
မ၀တ်ရည်ရေ ဘူးသီးကြော် / အကြော် မျိုးစုံလုပ်နည်းလေး
လမ်းပြပေးပါ်.မုန်.နှစ်စပ်နည်း လေးပါ တင်ပေးပါနော်.
အကြော်အားလုံးအတွက် မုန့်နှစ်အစပ်က နှစ်မျိုှးရှိပါတယ်။ ပထမတမျိုးက တန်ပူရာအမှုန့်ကို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေး ရေနဲ့ ရောဖျော်ပါ။ ပြီရင် ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီ ဘူးသီးကြော်၊ ပြောင်းဖူးကြော်တို့ကို ကြော်နိုင်ပါတယ်
– နောက်တမျိုးက ဂျုံမှုန့်နဲ့ ကော်မှုန့်ကို ဆတူရောပြီ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ကာ ရေဖြင့် ပျစ်ပျစ်လေး ဖျော်ပေးပါ။ ပြီရင် ဘူးသီး(သို့) ပြောင်းဖူးလေးများ ထည့်ကာ ကြော်နိုင်ပါတယ်။ ငပျော်ကြော်တို့လည်း ဒီနည်းတူပါပဲ.. ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ… 🙂
khin thandar says:
ပရှုး ထမင်းကြော် ကြော်နည်းလေးသိချင်လို့ပါ .
ဟုတ်ကဲ့ ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ချက်နည်းလေး တချက်ရှာကြည့်လိုက်အနုးမယ်။ ၀တ်ရည်လည်း မလုပ်စားဖူးလို့ပါ.. ကျေးဇူးပါ
မမ၀တ်ရည် အစ်မဟင်းချက်နည်းတွေကို မောင်လေးကြိုက်လွန်းလို့ မောင်လေးဆိုဒ်မှာကူးတင်ထားတယ်
No Problem par!!! တင်ချင်တင်လို့ ရပါတယ်.. အားလုံးကို share ပေးပါတယ်.. 😀
ye linn mg mg says:
အမ လာလည် သွားတယ်နော် ။ အားပေးနေပါတယ် ။
ဒန်ပေါက်ချက်နည်း တင်ပေးပါဗျို့ ဟဲဟဲ ရွှေညောင်ပင် ဒန်ပေါက်ဆိုရှယ်ပဲ
ဟုတ်ကဲ့ တင်ပေးပါ့မယ်နော်.. ကျေးဇူး
Micro Wave ထဲမှာ အချိုပုဂံတစ်လုံးနဲ့ရေထည့်ပြီး ဆူပွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာပြောပေးပါ။
ရေပူချင်တဲ့ အနေထားပေါ်မူတည်ပြီ ၃မိနစ်လောက်ထားရင် ရပါပြီ.. 🙂
Soe Ei Ei Phyu says:
မမ ဒီနေ့မှ မမ website ထဲဝင်ကြည့်တာ။ အရမ်းမိုက်တာပဲ၊ အစ်မ မီးဖိုချောင်ကို သဘောကျတယ်။ ညီမလည်း ကြိုးစားပြီး မီးဖိုချောင်ကို ဒီ့ထက် ပိုပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်အောင် ပြင်ဆင်ရမယ်။ မမ ဟင်းတွေကိုလည်း ကြည့်ဖြစ်တယ်။
ပျော်ရွှင်ပြီး ဒီ့ထက်ပိုဆန်းသစ်ကောင်းမွန်တဲ့ ဟင်းတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေ…………
အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမရေ။ အားရင် ချက်စားကြည့်ပါနော်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့လည်း ပြည့်ရပါစေနော်.. 🙂
အမ၀တ်ရည်နောက်ဆိုရင်ထိုင်းအစားစာလုပ်နည်းလေးတွေကိုပါ တင်ပေးပါနော် သမီးက ထိုင်းအစားအစာကြိုက်လို့ပါ အမ ကိုယ့်ဘက်သာကိုလုပ်စားချင်လို့ပါ နော် အမ–
Ok I will sis.. Thanks 🙂
အမနောက်ဆိုရင်ထိုင်းအစားအစာလုပ်နည်းလေးတွေက ပါ တင်ပေးပါနော် သမီးက ထိုင်း အစားအစာကြိုက်လို့ပါ အိမ်မှာကိုယ့်ဘက်သာကိုလုပ်စားချင်လို့ပါနော် အမ ကျေးဇူးပြုပြီး
Post အသစ်မတင်တော့ဘူးလားလို့စိုးရိမ်နေတာ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..အရသာရှိတဲ့ဟင်းတွေအများကြီးချက်နိုင်ပါစေ….
Thanks also Chan! 😀
It’s my first time visiting to you blog and i like your kitchen.
I would like to know your facebook webpage.
Wutyee Food House Facebook: http://www.facebook.com/pages/Wutyee-Food-House/280091162578?sk=wall
မိးဖိုချောင်ကြည့်ပြိး အားကျလိုက်တာ အိမ်မှာတော့ ဖျောက်သောက်ဖဲ ညီမလေးရေ
ရုံးကတဖက်ဆိုတော့ ဟင်းကချက်ခြင် မုန့်လုပ်စားခြင် ပြီးရင် ဆေးရကျောရ တော့ မီးဖိုချောင်ကတော့ ၀တ်ရည်နဲ့တခြားစီ။ ဒန်ပေါက်ဖောက်နည်းလေးတင်ပေးပါဦးနော်
ဒန်ပေါက်ကို ရှေ့တပတ်ထဲ စမ်းပြီတာနဲ့ ချက်ချင်း တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်..:D
Email Subscription လုပ်ထားရင် ဟင်းသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါတယ်နော်.. 😀
Win Pa Pa Han says:
၀တ်ရည်ကလည်း အားပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါနော်.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. 🙂
မ၀တ်ရည်ရဲ့ မီးဖိုချောင်လေးက ၀င်ချက်ချင်စရာပဲနော်…ကောင်ပါတယ်..။
cho cho chit says:
မ ရေ …. microwave, oven ရှိပြီး မုန့် လုပ်တာ ချက်တာ ပြုပ်တာတွေမသိလို့နဲနဲလောက်ပြောပြပေးပါနော်… ကျေးဇူးပါ မမ။။
Oven ရှိရင် ကင်တာတွေ အတွက် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ အသားတွေကို အပေါ်မီး၊ အောက်မီးဖုတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဒီဂရီရွေး၊ အချိန်ရွေးပြီ ဖုတ်လို့ရပါတယ်..
Sandar Aung says:
အစ်မရဲ.ဟင်းချက်နည်းတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရင်က၀ါသနာမပါပေမယ်.အမြဲ ကြည်.ရင်းစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။အသေးစိတ်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။အစ်မရေပေါင်မုန်.အ ညိုကိုလုပ်တဲ့ဂျုံဆိုပြီးသီးသန်.ရှိပါသလား။ရန်ကုန်ဘယ်မှာဝယ်နိုင်ပါသလဲပြောပေးပါအုံးနော်
ပေါင်မုန့်အညှိအတွက်တော့ သိဘူး။ ရိုးရိုး ပါမုန့်အတွက်ဆိုရင်တော့ ဒုံးပျံထဲက ပါမုန့်လုပ်တဲ့ ဂျုံကိုပဲ သုံးတယ်
ပေါင် မုန်.အ ညို အ တွက် whole wheat flour ကို သုံး ပါ တယ်
sis yay…. sarr ngan thee fish paung lay lote chin lo pyaw pya pay par naw…tks
အစ်မ လာလည်သွားတယ်နော်…မီးဖိုချောင်လေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်..အစ်မကိုလည်းအားကျတယ်..အကုန်လုံးတင်ထားတာတွေက စားချင်စရာတွေချည်းပဲနော်..ဟီး ဟီး သရေတောင်ကျချင်လာပြီ..
haa Thanks sis! 🙂
ကောင်းလိုက်တဲ့ မီးဖိုချောင်လေး …
yay!!! မ၀တ်ရည် မီးဖိုချောင်ကြီးကို အနုကြမ်းဝင်စီးရင်ကောင်းမယ် 😛
စတာနော်.. စိတ်ဆိုးနဲ့ 😀
haaa ကြောက်ပါတယ် မလုပ်ပါနဲ့ ညီမေ၇.. 🙂
မမဝတ်ရည် cooking master မှာဝင်ပြိုင်ပါ့လား ဆုရမှာသေချာတယ်
haaa မပြိုင်တော့ပါဘူး sis ရယ်။ တော်ကြာ ဒိုင်တွေက အဆိုတော်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေ ဆိုတော့ သီချင်းမဆိုတတ်လို့ မရွေးရင် ဒုက္ခ။ ဟီးဟီး အလကား စတာ.. ကျေးဇူး
မရဲ့ မီးဖိုချောင်ကို ကြည့်ပြီး အားကျမိပါတယ်။ ဟင်းတွေလည်း ချက်စားချင်စိတ် ပေါ်လာတယ်။
ွှThanks par sis 🙂
သရက်သီးအစို ကုလားတည်လုပ်နည်းလေးပြောပြပါလားနော်…. ပုဇွန်ချဉ်လုပ်နည်းရော
၀တ်ရည်တော့ မလုပ်စားဖူးဘူး။ နောက်ပိုင်းကျမှ ချက်နည်းကြိုးစားတင်ပေးမယ်နော်
And without your permission, I copied some photos from your site and share on my Travels and Tours Page. I apologize for that.
I, now, would like to ask permission for your photos and to reference the recipes.
No Problem .. ၀တ်ရည် ဟင်းချက်နည်းတွေကို share ချင်ရင် share လို့ရပါတယ်။ Credit အနေနဲ့ http://www.wutyeefoodhouse.com လေး ထည့်ပေးရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်.. 🙂
su su hlaing says:
ွှကျေးဇူးပါ ညီမ.. 🙂
May Pu says:
အမရေ … အမရဲ့ မီးဖိုလေးက အရမ်းသပ်ရပ်တာဘဲ … အားကျတယ် … ဟင်းချက်နည်းတွေကလဲ အရမ်းစုံတာဘဲ …
Chal Lay says:
မမ သင်တန်းတွေဘယ်မှာတတ်ရမလဲ ညီမလဲတတ်ပီးအလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ Star Resources မှာ ၂၀၀၈လောက်က International Culinary Course ကိုတက်ရောက်ထားပါတယ်.. ကျေးဇူးပါ
Nu wah says:
Thu Ya Thu Ya says:
အစ်မရဲ့ အစားအသောက်ကိုကြည်လိုက်တယ်….။ အစ်မကတော်တယ်နော်…။ကျွန်တော်က အခု (Star Resource ) မှာသင်တန်းတက်နေတယ်…အချက်ပြုတ်ပိုင်းပါ…။
လိုအပ်ချက်တွေကို အစ်မ၇ှိမှာ လေ့လာလိုရတယ်….အခုလို တင်ထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…။
ကျွန်တော်က အခုမှ အစ်မရဲ့ website ကိုကြည့်ဖြစ်တာပါ…။အသိတစ်ယောက်ကပြောလို့ပါ..။ အစ်မ စာအုပ်ထုတ်ထားတယ်လို့ကြားတယ်…အစ်မ။ ကျွန်တော်အစ်မက …အစ်မရဲ့ အချက်အပြုတ်ကို သဘောကျတယ်…သူကစာအုပ်ဝယ်ချင်လို့တဲ့…ဘယ်နားမှာရနိုင်မလဲသိလို့ရမလားတဲ့….ကျွန်တော်ကိုပြောခိုင်တယ်…။
အစ်မရဲ့ Kitchen ပိုင်းကိုလဲလေးစားပါတယ်…။
( သူရ )…။
ဟုတ်ကဲ့။ Star Resource ကပဲလား။ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ၀တ်ရည် ဟင်းချက်စာအုပ် အားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါ။ စာအုပ်ကို စာအုပ်ဆိုင်တိုင်း၊ City Mart မှာဝယ်လို့ရပါတယ်… 🙂
အစ်မမှာ Facebook အကောင့်ရှိလား….အစ်မ…။
ရှိရင်ကျွန်တော်ကို ပေးပါလား….Facebook မှာဆိုတော့ sms ပို့ရတာ လွယ်တာပေါ့အစ်မ ….ကျွန်တော် Facebook အကောင့်က
Thu Ya Thu Ya…ပါအစ်မ..ကျွန်တော်မသိတဲ့အကြောင်းအရာ
တွေမေးလို့ရတာပေါ့….။ကျွန်တော် Gtalk ကတော့ lionheart9090 ပါအစ်မ…။
Hi bro, My Facebook accout facebook.com/chowityee par. Thanks 🙂
Nothing better thanafully equipped kitchen. 😀
Congratulations Wut Yee! Seems like your webpage is the most perfect Burmese Webpage ever seen so far!!! Do you run it personally or do u havearestaurant? I’m so keen to visit your restaurant if you have one!
I am just housewife, bro. Don’t open any restaurant. Thanks for want to visit my restaurant.. 🙂
စစ် – ကြက်သား ပလာတာ လုပ်နည်းလေးသိချင်လို့ ပါ။ အလုပ်ရုံက ကလေးတွေကို ချက်ကျွှေးပီး ဒါနလုပ်ချင်လို့ ပါ ။
ဟုတ်။ ကြိုးစားပြီ နောက်အပတ်ထဲလောက် တင်ပေးပါ့မယ်.. 🙂
zawmoe lynn says:
ကျနော်က မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာ အစားအစာကို အရမ်းကို ခုံမင်တဲ့သူပါ မ၀တ်ရည်အမျိုးသားကတော့ ရှယ်စားရမှာဘဲနော် ကံကောင်းလိုက်တာ။အစားအသောက်ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေ တင်ပေးတဲ့အတွက် မ၀တ်ရည်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
So welcome bro
Thanks sis.. 😀
saung thazin says:
ဟင်းချက်နည်းတွေကို သဘောကျတယ်။ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ အရသာရှိ ဟင်းချက်နည်းတွေလည်း တင်ပေးပါအုံးနော်။
သင်တန်းတော့ ဖွင့်ဖို့ မရှိဘူး sis.. ၀တ်ရည်က အိမ်ရှင်မပါပဲ၊ ဟင်းချက်ဝါသနာပါလို့ ပြန် share ရုံပါ.. ကျေးဇူးပါ
khin mya aye says:
ဇကာတစ်ခုနဲ့ ဆီစစ်ထားပေးပါ… အဲဒါဆို မပျော့ပါဘူး..
Moe Zatt says:
ရေလည် လန်းတယ်ဗျာ ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုး မီးဖိုချောင်လေးလိုချင်လိုက်တာ
မ၀တ်ရည်ရဲ့ မီးဖိုချောင် လေးကသပ်ရပ်ပြီး သန့်ရှင်းနေတာပဲ။ ပစ္စည်းတွေလဲ စုံပြီးချက်ချင်စဖွယ်လေး။
အမက သိပ်တော်တာပဲ.. ချီးကျူးပါတယ်နော။ ဆက်ပြီးတော့…လူသားအားလုံးအတွက် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့…စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မ၀တ်ရည်ရဲ့ ဟင်းလက်ရာ အစီစဉ် ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် တင်ဆက်နိုင်ပါစေ..
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ပြည့်ရပါစေနော်။ Thanks 😉
Pyae Soe Khine says:
Nice kitchen! Love it…<3
Sis, Thanks for your sharing also.
hnin nandar says:
မန္တလေးမြှီးရှည် နဲ့ မြေအိုးမြှီးရှည် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါ အုံးနော်
I would like to learn how to make smoothie? Can you teach me please? 🙂
I m your big fan and have bought every book of yours every month 🙂 since last year December…and thank you for all the contents and methods…they are really good 🙂 please teach me how to make smoothie ..thanks
Ei Sandi Maw says:
several kinds of kitchen ware.
Nay Zaw says:
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မီးဖိုချောင်မဟုတ်ပါဝူး အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်နေတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ဘယ်အရာနဲ့မှမတူညီတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမူ့ကိုပေးနိုင်တဲ့နေရာပါ ခုလိုမျိုးပစ္စည်းအစုံအလင်ရှိတဲ့နေရာ ဆိုရင်တော့ပြောပြစရာကိုမလိုလောက်တော့ပါဝူး ဒီ page အတွက်အစ်မကိုယ် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
So welcome bro 😀 Thanks
about Australian Universities is very true. These days they are riven with commercial sensitivities relating to their reliance on foreign students asakey funding source in an increasingly competitive international market.Staff are forcefully reminded that insulting customers is not generallyasustainable business practice.
Hlaing Bwer Aung says:
အစ်မရေ အစ်မကိုအားပေးနေမယ်နော် cake မုန့်လုပ်နည်းလေးတွေလဲတင်ပေးပါအုံးနော်
Microwave နှင့်​ချက်​ပြုတ်​အသုံးပြုနည်း​​လေးတင်​​ပေးပါလား(​ကျေးဇူးပြု၍ )
http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=5001/ ဒီလင့်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်.. 😀
so cool. i love it all. u r so smart.;D
တော့ပုကီ လုပ်နည်းလေးတင်ပေးပါလား မ၀တ်ရည်
Wai Lin Aung says:
I can’t see those Myanmar fonts. Which Myanmar fonts should i use to see your post?
Lin Htet Paing says:
I would like to requestapermission from you.
I raceacompetition that is held by my university (UCSY).
So I want to developamobile app that is about curry.
I can promise that is I have ever use your way of cooking asabusiness.
This is just for my competition.